Ithegi: inqaku lokukhuthaza umnatha | Martech Zone
Ithegi: inqaku lokukhuthaza umnatha
Intengiso yezicelo zefom ixakekile. Kukho iinkampani ezijikeleze ukusingathwa kophuhliso lwefom ngaphezulu kweminyaka elishumi kwiwebhu, kodwa itekhnoloji entsha ihlala inamava omsebenzisi aphezulu kakhulu, ukunikezela ngengqondo okunzima, kunye neetoni zokudityaniswa. Kuhle ukubona le ntsimi ihamba phambili kakhulu. Inkokheli enye phaya yi-Fieldboom, eneempawu ezibandakanya: Ukupakisha Impendulo-Faka impendulo yombuzo odlulileyo njengenxalenye yombuzo omtsha
NgeCawa, Agasti 28, 2016 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 15, 2017 Douglas Karr
Kwiminyaka eyadlulayo, ndandisebenza kwinkampani eyayilandela umthamo wazo weefowuni kwinkonzo yabathengi. Ukuba ivolumu yabo yokufowuna inyukile kwaye nexesha lokufowuna lincitshisiwe, banokuyibhiyozela impumelelo yabo. Ingxaki kukuba babengaphumelelanga kwaphela. Abameli beenkonzo zabathengi bavele bakhawulezisa yonke iminxeba ukugcina ulawulo lusemva kwabo. Iziphumo zabanye abathengi ababenomsindo kakhulu ekwakufuneka baphindaphinde umnxeba kwakhona ukufumana isisombululo. Ukuba u
Yeyiphi inkqubo yeNqaku leNkuthazo yeNet (NPS)?
NgoMvulo, Julayi 21, 2014 NgoMvulo, Matshi 13, 2017 Douglas Karr
Kwiveki ephelileyo, bendiye eFlorida (ndenza oku ngekota nganye okanye njalo) kwaye okokuqala ndimamele incwadi enokuVakala xa usihla. Ndikhethe Umbuzo wokuGqibela 2.0: Iinkampani zeNet Promoter ziChuma njani kwiLizwe eliQhutywa ngabaThengi emva kwengxoxo kunye neengcali ezithile zentengiso kwi-Intanethi. Inkqubo yeNqaku leNkuthazo yeNet isekwe kumbuzo olula… owona mbuzo wokugqibela: Kwinqanaba le-0 ukuya kwi-10, njani
Ungalivelisa njani ixabiso kwiNtengiso yeDijithali
NgoMgqibelo, Matshi 22, 2014 Douglas Karr
Kule veki nje ndaye ndadliwanondlebe malunga nomsebenzi wokwenziwa komsebenzi esiwenzayo kwaye enye yeengxaki esizifumana ziphambili kuninzi lwethemba lethu kunye neenzame zokuthengisa zabathengi kukuba bafuna ukuba bangazakhi iindawo abanethemba kuzo kunye nabaxumi- bayayakha ngokwabo. Sukundibetha ngokungalunganga, ewe inkampani yakho ifuna ukuyithanda indawo yakho kwaye iyisebenzise njengesixhobo… kodwa ulawulo oluphezulu, iqonga, kunye